Ciidamada Koofur-galbeed oo u gurmaday Abuu-mansuur
Ciidamada amaanka maamulka Koofur Galbeed oo wata gaadiid dagaal ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray deeganka Abal ee gobolka Bakool, halkaasoo maalhii ugu dambeeyay ay dagaallo ku dhex marayeen maleeshiyada Alshabaab iyo rag hubeysan oo uu hogaaminayo gudoomiye kuxigeenkii hore ee xarakada Mukhtaar Roobow Cali Abuu-mansuur.
Deeganka uu dagaalku ka dhacay oo 18km magaalada Xudur koofur kaga beegan ayaa waxaa hadda kuwada sugan Ciidamada dowlad-goboleedka K/galbeed iyo Malsheeiyada Abuu Mansuur, waxaana halkaasi isaga baxay dagaalyahannadii Alshabaab ee weerarka soo qaaday.
Wax iska hor imaad ah oo u dhexeeya ciidamada K/Galbeed iyo Alshabaab goobta kama dhicin.
Wasiirka Amniga K/Galbeed Xasan Xuseen Max’ed ayaa noo hubiyay in ciidamo K/Galbeed ka socda ay gaareen deegaanka Cabal.
Sidoo kale Shiine Macallin Nuurow oo hogaaminaya ciidamada u gurmaday Mukhtaar Robow oo ay VOA la hadashay ayaa dhacdadan xaqiijiyay.
Mukhtaar Roobow Cali Abuu-mansuur oo isagu ka gadooday Alshabaab ayaa muddooyinkanba waxaa fariisin u ahaa deegaankaasi, waxaana socday wahadal u dhexeeya wadaadka iyo Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, kaasoo la xiriira sidii loogu qancin lahaa inuu isku soo dhiibo Dowladda.
Dowladda Mareykanka oo horey madaxa Roobow lacag u dul dhigtay ayaa dib ula laabatay, waxaana jirta hadal heyn la xiriirta in gabi ahaanba laga saaray liiskii argagixisada ee Washington.
Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamul-goboleedka KG oo mar sii horreysay VOA-da wareysi siiyay ayaa sheegay in haddii Abuu-mansuur uu kaalmo milatari kasoo dalbado ay u gurman doonaan, hase ahaatee ilaa iyo hadda lama oga in arrintani ay ku timid codsi Roobow ka yimid iyo in kale.